तम्रा लागि दुश्मनका गोली थाप्ने छाती यही हो तर भुल्यौं है ? — OnlineDabali
Posted on October 20, 2018 by अनलाइन डबली
हेर बड्डा, तम्रा लागि दुशमनको गोली थाप्ने छाती यहि हो । तम्रा लागि कति दुश्मनको घाँटी छिनाएका यिनै हातहरु हुन् । अनि तम्रा लागि दुशमनलाई निशाना बनाउन एलएमजीको कुन्जो धानेको काँध पनि यही हो ।
किनकी हाम्लाई लाउँथ्यो कि तिमी जब जिउँदा रहन्छौ तब धेरै ‘म’ हरु बाँच्नेछन् । त्यसैले तम्लाई बचाउन धेरै ‘म’हरु मरे । तर, १७ हजार हामीहरु मरेर पनि त्यो सावित हुन नसक्दा मलाई लाग्छ । मैले यी बड्डा बाँचे धेरै निमुखा, उत्पीडित, विभदमा बाँचेकाहरु बाँच्छन् भन्ने भ्रम पालेर हुर्काएर राखेछु ।
कुनै एक समय थियो । तम्रा बोली सुन्दा मात्रै पनि न्यायको आभास हुन्थ्यो । तम्रा पोस्टर मात्रै देख्दा पनि गर्वले छाती चौडा हुन्थ्यो । तर, आज ती चौडा छाती खुम्चिएर गएको छ । महसुस भएका न्यायहरु पीडामा परिणत भएका छन् ।
अनि तम्रा फोटो देख्दा खै कहाँ हो कहाँ भित्रै आँधी बेहेरी आए जस्तो लाग्छ । तुफान उर्ले जस्तो लाग्छ । आवेगको आगो दन्किएको नयनहरु आँशुको सहाराले निभाउन बाध्य हुन्छन् । अहँ ! अब उति बेला जस्तो आफ्नोपन देख्दिनँ बड्डा तम्र आत्मामा !
मलाई त भान हुन्छ, ती फुटेका चुराले, पुछिएका सिन्दुरले अनि रित्तिएका काखहरुले मलाइ थुकिरहेका छन् । विरक्तिएका मनहरुले अनि बगेका आँशुका सागरहरुले सरापिरहेका छन् । बड्डा तम्ले गर्दा हामी अलिकतीमाथी त पुग्यौँ तर बिछ बाटैमा अलमल्ल पर्यौँ ।
न अघि जान सकिन्छ झन पछाडि फर्किन त अत्यन्तै ठुलो पहारा छ । कुरै नगरुँ ।
अन्तमा तमलाई एउटा प्रश्न ! हाम्रो राष्ट्रप्रतिको योगदान डलरमा भुल्यौ है ?